ရှုမဆုံးတော့ပြီ………….. (Panorama) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရှုမဆုံးတော့ပြီ………….. (Panorama)
Posted by Diamond Key on Dec 13, 2011 in Photography | 30 comments
စိန်သော့ရဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်စု စိန်သော့ ရဲ့ ရိုက်ချက်
Panarama Photos ဆိုတာက မြင်ကွင်းကျယ် (မြင်ကွင်းရှည်) ပုံလေးတွေပါ။ ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံပညာ စတင်လေ့လာတဲ့ လွန်ခဲ့သော အချိန်တွေ တုန်းက ဆိုရင် Digital နည်းပညာတွေကလည်း ဒီလို မထွန်းကားသေးတော့ မြင်ကွင်းကျယ် ဓါတ်ပုံတွေ ရလိုရင် ဓါတ်ပုံတွေကို “ဖြတ်ညှပ်ကပ်” (ဆက်မဲ့ ပုံတွေကို ဆက်ကြောင်းရှာပြီးဖြတ်၊ မသိသာအောင်ညှပ်၊ ပြန်ကပ်) တွေ လုပ်ပြီး ဖန်တီးရပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ Digital နည်းပညာတွေကလည်း တိုးတက်လာတော့ Panorama ရိုက်လို့ရတဲ့ နည်းပညာ ပါတဲ့ ကင်မရာ၊ (တစ်ချို့ အပျော်တမ်း ကင်မရာလေးတွေ မှာတော့ ရိုးရိုးမြင်ကွင်းကိုပဲ အပေါ်နဲ့ အောက် အမဲဘောင် ကာလိုက်ပြီး ပုံရှည် ဖြစ်သွားသယောင် ကင်မရာမျိုးကိုတော့ Panorama ရိုက်လို့ရတဲ့ နည်းပညာ ပါတဲ့ ကင်မရာ စာရင်းမသွင်းလိုပါ)၊ ဒါမှမဟုတ် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို Panorama ပုံတစ်ပုံ ဖြစ်အောင် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ software လေးတွေများစွာ ပေါ်လာပါတယ်။
မင်းကွန်းဒေသ နဲ့ မြသိန်းတန်စေတီ
ဒီလို ပုံဆက် Panorama ရိုက်မယ်ဆိုရင် မြင်ကွင်းကျယ်ပုံမှာ လိုချင်တဲ့ အစအဆုံးကို ပုံပေါင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းရပါတယ်။ ရိုက်တဲ့ ပုံတွေ Exposure ညီဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ ပုံရှည်ဆက်တဲ့အခါ ပုံတစ်ပုံထဲမှာ အရောင်တွေ နုလိုက်ရင့်လိုက် ဖြစ်မနေမှာပါ။ ရိုက်တဲ့ ပုံတွေအားလုံး ရေညီပြင်ညီဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ ဆက်တဲ့ အခါ လွယ်ကူမှာပါ။ Normal မြင်ကွင်း (Normal Lens) နဲ့ ရိုက်သင့်ပါတယ်။ Wide lens နဲ့ ရိုက်ရင် မှန်ဘီလူးကြောင့် ပုံတွေက ပုံပျက်ခြင်း ( Distraction) ဖြစ်တတ်တော့ ပုံဆက်ရင် တစ်ပုံအဆုံးနဲ့ တစ်ပုံအစ မညီနိုင်ပါ။ ဆက်ဖို့ ရိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေက တစ်ပုံနဲ့ တစ်ပုံ ဆက်နိုင်ဖို့ ပုံတွေရဲ့ အစနဲ့ အဆုံးတွေမှာ တူညီတဲ့နေရာတွေ ပါရပါမယ်။ ဒါတွေအားလုံး ok ရင် ပုံဆက်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
အောက်က ပုံဆက်မယ့် ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပါ။
ဒီပုံလေးတွေကို ဆက်ထားတဲ့ ပုံလေးနှစ်ပုံကို ပြပါမယ်။ ဒါက အသေးပါ။
21 မိုင် ရှုခင်းသာ
ရှုခင်းလှလှတွေကို Panorama ပုံရိုက်ပြီး ပုံရှည်ကြီးတွေ ကူးရင် အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။
(ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ အမျာကြီး ရှိနေပေမယ့် တင်ရခက်နေတာကြာင့် တင်လို့လွယ်တဲ့ ပုံလေးတွေပဲ ပြလိုက်တယ်)
ကိုရင် နိုဇိုမိ ကလည်း ပုဂံကို တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ မြင်ကွင်းတွေရိုက်ပြလိုက်။
ကိုစိန်သော့ကြီးက ဓါတ်ပုံ ပညာတွေ ပြလိုက်။
ကျွန်တော့်မှာ မင်းကွန်း ကို ကြိုးစားပမ်းစား ရိုက်လာတဲ့ပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်ပြီး
အားငယ်သွားတာနဲ့ တင်တော့ပါဘူးဗျာ။ ဆရာတွေ ရိုက်ချက်ပဲ ခံစားပါတော့မယ်။
တင်ပါဗျာ။ မတူတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတွေ ခံစားရတာပေါ့။ ရိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေလည်း ဖလှယ်ခွင့် ရတယ်လေ။ မျှော်နေပါတယ်။
ဘာသုံးလဲကျ ထည့်ပြောတွားဝူး …..ခစ်စ်…
ဆြာတို့ နိုက်ကွန် ဆော့ဖ်ဝဲတွေ လန်းတယ်ကြားတယ်
Arc Panorama Maker3နဲ့ပါဆြာရဲ့
ဘာမှ မဆြာဘာဘူးဗျာ ..
အဲ့ဆော့ဝဲတောင် ခုမှ ကြားဖူးတာပါ…
တားတား က ရိုက်သက် လာမယ့်လမှ ၁နှစ်တင်းတင်းပြည့်မှာပါဆို…
ပညာ ယူသွားပါတယ်။ စမ်းကြည့်ဦးမယ်ဗျို့  …
စမ်းကြည့်တဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း မဖြစ်မနေ ပြပေးအုံးနော
ရှည်လမျောပုံတွေက ဘလော့ဂ် Header အတွက် လားဂျ
တော်လိုက်ကြတာ … မျက်လှည့်ပြလိုက်သလား အောက်မေ့ရတယ် …
ဆရာသမားတွေပညာတွေမြင်ရတာနဲ့ ဓါတ်ပုံတင်ရမှာတောင် မျက်နှာငယ်လာပြီ …
Panorama ရဲ့ အရသာကို ခုမှပဲ ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားမိတော့တယ်။
တစ်ပုံချင်းကို ဆက်ပြလိုက်တာ မျက်လှည့်ပြလိုက်သလိုပဲ ကြိုက်မှကြိုက်။
ကိုစိန်သော့ရေ ကျနော် G 12 ဘဲကိုင်တာပါ အခုထိ လှုပ်နေတဲ့ပုံရိုက်လို့မရသေးဘူးဗျ။
Canon Power Shot G12 လားဆြာ၊ ဒါဆို ပညာကုန် ထုတ်သုံးလို့ ရတဲ့ ကင်မရာနော်။
ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ကြုံတာလဲ။ G12 နဲ့ဆို Good သဗျ။ G12 ဆိုရင် ISO ဆိုရင် 3200၊
Exposure ဆိုရင် Auto, P, Tv, Av, M ပါတယ်။ ဒါဆို M နဲ့ Tv မှာ လှုပ်နေတဲ့ပုံ အားလုံး ရသဗျ။
ကိုစော့သိန် ရေ ပုံတွေအားလုံး ကြည့်လို့ အရမ်းကောင်းပါတယ် ဗျို့ 
ဒီလောက်ဘဲ ပြောတတ်လို့ ပါ နော
ဦးစိန်သော့ ဓတ်ပုံ တွေကြည့်ပြီး .. အံ့ကို သြ ယူရတယ် ဗျို့  …. မန်းလေး မရောက်ရောက် အောင်လာပြီး တစ်ရက်လောက် .. လည် ချင်လိုက်တာဗျာ … ပညာ အတော် ရမှာဗျ ..
လာမယ်ဆို PM လေးကြိုပို့လိုက်လေ။ ရိုက်စရာနေရာလေးတွေ လိုက်ပြပေးမယ်။
Photographic Tour Guide လိုရင်
အဲ့ဒါ အဲဒါ ရိုက်ချင်မိတာဗျ
ဖိုတို တိုး ဂိုက် အဖြစ် ကူညီပေးမှာလား ဗျို့ 
အဲဒါ ဟိုဆြာ နှဟ်ယောက်က ကျွမ်းသဗျ။ တစ်ယောက်က ဒီက စိုင်တွေ ဝိုက်တယ် (ကင်မရာနဲ့)။ ဟိုတစ်ယောက်က ဟိုက စိုင်တွေ နှိပ်တယ် (ခလုပ်)။ ဒီနှစ်ယောက်ရှိတယ်။
ဦးစိန်သော့ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး စစ်ကိုင်းတံတားနဲ့ စစ်ကိုင်တောင်ရိုးကို သတိရသွားပြီ…….:)
Panaroma maker က ပတ်ချာလည်လှည့်ကြည့်လို့ရတဲ့ ဖန်ရှင်ပါတယ်ထင်တယ်နော် ..
အဲဒီလို့ ကြည့်လို့ရတာ မိုက်တယ်ဗျ … တကယ်ရောက်နေတဲ့အတိုင်း လိုချင်တဲ့နေရာကို ကြည့်လို့ရတာလေ .. အခုပုံလေးတွေလဲ မိုက်တယ် .
ဟုတ်ကဲ့ ၊ ပါတယ်ဆြာ။ ဒါပေမယ့် သူက အဲဒီ softwareလေးတင်မထားရင် မပြနိုင်လို့ ချန်ထားခဲ့တာပါ။ အပေါ်က ၂၁မိုင် View Point မှာ ပုံ (၈) ကျန်သေးတယ်။ အဲဒီပုံလေးဆက်တွဲရင် ဆြာပြောတဲ့ Panorama 360ံဖြစ်ပြီ။
ကိုစိန်သော့ရယ် အားကျလိုက်တာ ရိုက်ကြည့်ချင်တာ အဲ့လိုလေး ရိုးရိုး အိမ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်နဲ့ ဆိုရင်ရော ရိုက်လို့ ဖြစ်လား ပြီးရင် ဘယ်လို ဆက်တာလဲ ဘယ် software ကို သုံးရလွယ်လဲ
အားရင်ပြောပါတယ်ကင်မရာ အသုံးပြုပုံလေး ရေးပါလား မော်ဒယ်နံပါတ်ပြောမယ်လေ (အချိန်ရမှာပါ)
SONY , DSC – T2
SONY , DSC – W 30 ( ဒါက ပထမဆုံးပေါ်စမှာ ၀ယ်တာ )
ရိုးရိုး အိမ်သုံး ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာလေးတွေနဲ့ ရိုက်လို့ ရပါတယ်ခင်ဗျ။
Arc Panorama Maker3software လေးကတော့ သုံးရတာ လွယ်ပါတယ်။
ကင်မရာ အသုံးပြုပုံလေးတွေေ၇းနိုင်အောင် ကြိူးစားပါ့မယ်။
တစ်ကယ့်ကို ရှု မဆုံးတော့ ပြီ ပဲဗျို့ …..။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘာမှ မရှိသေးတော့ အားကျရုံ ပဲ ကျလို့ ရပါသေးတယ်……။
ဒါကြောင့်လဲ ကိုစိန်သော့ ကိုစိန်သော့နဲ့ ကျော်ကြားပေတာကိုး။
မလေးဇာတ်လမ်းကိုလဲ ဆက်ဆွဲအုန်း လေဗျာ။
မလေးဇာတ်လမ်းတင်ရင်းနဲ့ ခင်ဗျားမှတ်တမ်း Panorama တွေတွဲတင်ပေါ့ဗျာ။
ပုံလည်းကြည့်ရ ဇာတ်လဲဖတ်ရတော့ ပိုထိတာပေါ့။
ဆာသော့ရေ တပည့်ခံချင်လို့ လိပ်စာလေးများမစပါလား။
– ပုံပေါ်မှာ ကလစ် တစ်ချက် နှိပ်ကာ
– နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ ပုံပေါ်မှာ ကလစ် တစ်ချက် ထပ်နှိပ်လိုက်ပြီး
– ပေါ်လာတဲ့ ပုံကို Right ကလစ်နှိပ် Save Image As… ဖြင့်ရယူနိုင်ပါကြောင်း
အဲ့လို ပန်နိုရားမား မြင်ကွင်းကျယ် ရိုက်လို့ရတဲ့ app လဲ iPhone မှာ ရှိတယ်ဗျ။ တခြားဟာတွေ ကို သိပ်မကြိုက်ဘူး Pano ဆိုတာလေးကတော့ အတော်လေး အဆင်ပြေတယ်။
ကိုယ် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံရဲ့ အဆက်လေးတွေကို ပြန် ပြပေးတယ် နောက်တစ်ပုံရိုက်ရင် အဲ့ဒီတော့ ရေပြင်ညီအောင် လက်ကို ထားနိုင်ရင် အတော်ကြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ ရိုက်ရတာ။
ပြီးရင်လဲ ဖုန်းပေါ်မှာပဲ တစ်ခါထဲ ဆက်ပေးတယ်။ သူက
တကယ့် ကင်မရာကြီးတွေလိုတော့ အလင်းတွေ ဘာတွေ ညာတွေ မကောင်းဘူးပေါ့လေ။ ရာသီဥတု ကောင်းရင်တော့ ပုံလေးတွေ တော်တော် လှပါတယ်။
app store မှာ ၀ယ်ရင် ၁.၉၉ ဒေါ်လာ ပေးရပါတယ်။ ဂျေးဘရိတ် လုပ်ထားရင်တော့ ဖရီးပေါ့လေ။း)